dhismaha ugu xigay haysa
Miisaanka sawir 1: 0.5 1 2 3 4 5 6
Dhexroor ee beebka D
Dhexroor rakuubbo B
Length thread H
Xisaabinta oo ka mid ah tirada haysa dhismaha
D - Dhexroor ee beebka
B - Dhexroor rakuubbo
H - dhererka Thread
Z - ansixin
Buy Dhismaha hardware maaha wax dhibaato ah. Sales leeyihiin qaybood ah munaasabadaha kasta. clamps biibiile, clamps dayactirka ee size kala duwan iyo Noqosho. Laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in kulankaan dukaan oo aad rabto si ay u sameeyaan u xigay a naftaada aanan.
collar waxaa ka mid ah haraaga ah xidhnayn la nuts iyo saxanka ku tirtirayaan. Hairpin kacaba on dhexroor biibiile oo collar bir ah ayaa diyaar u ah. saxan presser Labada godad waxaa qoday. Waxaa haboon in ka badan pin iyo cadaadisay ka dhanka ah waxaa biibiilaha, sida haysa. Inta badan loo isticmaalo dhismaha dayrarka, taas oo ku xiran yihiin in ay bar saxanka.